Kedu ihe bụ humus na otu esi eji ya - Fatịlaịza - 2019
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi maara ihe humus dị ala, ọ dị ezigbo mkpa maka mkpụrụ dị elu na ahịhịa ọkụ na ubi. Ọbụna ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ nke aka ya. Otú ọ dị, mmalite nke ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi adịghị aghọta mgbe niile ihe a na-ekwu, ihe kpatara akụkụ a nke ala, ihe ọ na-emetụta nakwa ebe ọ ga-esi nweta ya. Ụzọ aghụghọ niile anyị ga-akọwa mgbe e mesịrị na ihe a.
Kedu otú e si akpụ humus n'ala na uru ndị bara uru
Nhazi ala site na ala humus n'ala
Humus dị nwayọọ
Humus dị ala
Nzuzo nke agronomists: otu esi eme ka ala humus di n'ala
Kedu ihe bụ humus, nkọwa nke
Onye ọ bụla anụwo okwu ahụ humus, ma ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ikwu ihe ọ bụ. Oke - ihe metụtara ala. Ọ bụrụ na ị na-ezo aka na nkà mmụta sayensị, i nwere ike ịchọta nkọwa ndị a: Nke a bụ ihe dị mgbagwoju anya nke ogige nitrogen, nke na-apụta n'ihi nchịkọta ihe ọkụkụ nke osisi n'okpuru nduzi nke enzymes nke microorganisms nke dị n'ala na-emepụta. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, humus bụ humus nke ọtụtụ ndị na-akọ ubi na-emepụta n'ala ha. Nke a fatịlaịza na-ewu ewu ma n'ubi, ubi kichin, na ịkụ osisi nke ime ụlọ.
Nkọwa ndị ọzọ na-eme ka o doo anya na a pụkwara ime humus na-adabere n'ụdị anụ ọhịa - ihe nkwụsị. Ha na-ekewa ya dị iche iche na-adabere na onye na-agbaba akwụkwọ bụ ihe ndabere. Ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na ihe humus na humus bụ, ọ ga-edozi nke ahụ ndia bu ihe di iche iche. Ya mere, otu ọrụ dị mkpa n'ime ihe e ji kee humus na-egwu ụwaworms. N'ihi ọrụ dị mkpa ha na-eme, a na-eji mkpụrụ nwere uru bara uru ma na-enweta uru pụrụ iche. Ufodu ugbo ndi ozo di iche iche ma tinye ikpuru n'ala ala ubi ma obu ubi. Ngwurugwu na microorganisms na-etinye aka na nhazi nke mkpụrụ. Humus bụ ọ bụ mkpụrụ na-adịghị emeso ya na ikpuru, ụdị dị iche iche nke humus.
N'ihe banyere ọdịnaya nke bekee, acids humic bụ isi nke acids humic, nke bara ezigbo uru maka osisi. Ha anaghị agbaze na mmiri ma ọlị, mana ha na-edozi sodium pyrophosphate, soda, amonia, alkalis. Ihe ọzọ bara uru bara uru bụ acid fulvic. Ha na-agbapụta na mmiri ma na-eme ka acid dị ike. Ejighị mmiri na mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na humic, bụ nke na-agụnyekwa ya. Humus nwekwara ihe dị iche iche nke acid nke na-eme ka ahụ kwụsie ike.
Usoro okwu a nwere ike itolite n'ala n'onwe ya. Osisi dị iche iche dị n'okpuru ala na nke elu na-anọgide n'ime ala mgbe ha nwụsịrị na decompose. Na-adabere na ịgha mkpụrụ na ogo nke uto ha, ọnụ ọgụgụ ihe dị n'ime ala ga-adịgasị iche iche.
Mgbe nkwarụ, usoro nke ịdị ọcha na-apụta, mgbe nke ahụ gasịrị, humus oyi akwa na-enweta agba mara aja agba aja aja. Nke a bụ azịza zuru oke maka ajụjụ banyere otú humus si malite. Ọ bụ ezie na egosiri ya ebe a n'ụzọ doro anya, n'eziokwu, mgbe e guzobere mkpụrụ, ọtụtụ usoro ọgwụ siri ike na-eme. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ site na annelid, nke mezigharị usoro mmetọ.
Ọ dị mkpa! A na-eme ka okwu ahụ dị nwayọọ ma ọ bụrụ na ịnweta oxygen na oke iru mmiri.
Banyere ọrụ humus n'ala, uru ya bara uru na-adabere na ihe organic bekee guzobere ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ fatịlaịza zuru ụwa ọnụ nke dị mma maka ụdị osisi na ala dị iche iche. Ọzọkwa, a na-echekwa ya kpamkpam n'ime ala, na-etinye ya na ihe ndị bara uru. Dịka ọmụmaatụ, na ala ụrọ, ọ na-adị ruo afọ ise, na-eme ka mma nke ọma mara ala. Humus na ọmụmụ - ihe jikọrọ ya. Ma na mgbakwunye, mkpụrụ ahụ na-emetụta ọkpụkpụ nke ala ahụ, na-eme ka ọ dịkwuo ụda ma jiri nwayọọ nwayọọ na-eme ya.
Ị ma? Humus gbanwere ala. Ekele ya, osisi siri ike na-aghọ ihe na-abaghị uru. Ọ na-akwalite ikuku na ikuku na mmiri.
Ihe ọzọ dị mkpa nke mkpụrụ ahụ bụ ike ejikọta salts nke hydrocarbon aromatic, radionuclides, na nnukwu ọla ndị dị n'ala. Ọ na-etinye ya n'ime onwe ya, kee ya ma ghara ikwe ka ọ gbasaa n'ihu.
Ya mere, anyị enyela nkọwa nke humus, ghọta ihe ya na uru ya nwere maka ala. Ugbu a, ka anyị ghọta ụdị ala ndị dị na ya. Dịka e kwuworo, a na-akpụ humus site na ihe ọkụkụ. N'ihi ya, ihe ka ọtụtụ n'ime ha n'ala, ihe ka mma n'ime humus n'ime ya. Ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ 15%. Ọ bụ njirimara nke ala ojii. N'ọdịiche ndị ọzọ ọ dị ntakịrị. Dabere na njirimara a, ha na-ekewa n'ime ụdị ndị a.
Ndị a bụ ndị a na-akpọ ala dara ogbenye, nke nwere ihe karịrị 1% nke humus. Dịka ọmụmaatụ, ọnụ ọgụgụ nke humus na ala podzolic, bụ nke nwere ụdị ọhịa coniferous, dị ntakịrị n'ihi ntakịrị ihe ọkụkụ na nnukwu ọdịnaya mulch n'elu elu.
Ị ma? Ebe ọ bụ na humus nwere agba aja gbara ọchịchịrị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji, ọ na-enwu ìhè anyanwụ na-echekwa okpomọkụ. Ala ndị dị otú ahụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, n'ihi ya, oge ịgha ihe na-abịakwasị ha na mbụ karịa ndị ogbenye.
Enweghi humus ọdịnaya n'ime ala dara ogbenye. O nwere obere lime na humus, ya mere, mmiri na ikuku na-adabaghị ya. Ke adianade do, ọ na-ewetu ọrụ dị mkpa nke ihe ọkụkụ, nke na-adịghị etinye aka na ngwa ngwa na nke dị oke mkpa nke humus.
Ụdị ala a dị ntakịrị karịa nke gara aga, n'ihi na nwere site na 1% na 2% nke humus.
Ala humus dị ala, nke ọdịnaya nke mkpụrụ ahụ ruru 3%.
Ụdị ụdị humus kacha mma 3 - 5% n'ala. A na-ejikarị ya emepụta okooko osisi na ogige osisi.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na onye ọ bụla na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi na-achọ ka osisi na-amị mkpụrụ na-amị mkpụrụ na humus. Mana ọ bụrụ na ihe gbasara ụlọ ime ụlọ ajụjụ a dị mfe idozi, mgbe ahụ mgbe ị na-edozi nnukwu oghe, ebe a na-aza ajụjụ banyere otu esi eme ka ihe dị mma nke humus dị n'ụdị ala. Enwere ike ime nke a n'otu ụzọ anọ dị mkpa:
ịmepụta onwe gị;
ntinye nke humus n'ime ala;
mepụta ala ọnọdụ maka ọrụ nke ikpuru na microorganisms;
na-agbaso ụzọ ziri ezi nke ihe ọkụkụ n'ubi na n'ogige.
Ụzọ kachasị mfe iji chefuo nkwụsị nke ala ọmụmụ bụ nke mbụ. Ná mmalite nke isiokwu ahụ, mgbe anyị tụlere ajụjụ nke ihe a na-akpọ humus, anyị mere ka o doo anya na ọ na-esite na mkpuru osisi. Ya mere, o zuola iji nri mkpochapu anụ, nsị anụ ụlọ, ịda akwụkwọ, ahihia wepu, ahihia ihe ubi n'ime otu compost ma chere ka compost na-etolite. Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-agbakwunye ya ikpuru iji mepụta mkpụrụedemede a chọrọ.
Iji mee ka humus dịkwuo elu, enwere ike itinye ya na ala dị ka fatịlaịza, ma na nke a, ị ga-achọ ịma otu esi eji mkpụrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi. Mechie ya n'ime ala elu n'elu ala. Ihe miri emi na-emikpu n'ime ala na-adabere n'ebumnuche nke edoziri ala. Dịka ọmụmaatụ, n'okpuru osisi osisi na osisi, a na-emikpu ya na omimi nke ọkara mita ma ọ bụ karịa n'ime oghere ọ bụla. Mgbe ị na-akụ ihe ubi, a na-eli ya na akwa ruo ogo 40 - 60 cm.
Ọ dị mkpa! Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi, na mgbakwunye na humus, tinye nri na ịnweta ala, na-edozi ajụjụ banyere otu esi eme ka ọmụmụ ala. Otú ọ dị, ịdị elu nke mineral na-emerụ ahụ ọkụ. Ya mere, a na-atụ aro ụdị nri dị otú ahụ iji tinye ya n'ọrụ nke ọma. Ọzọkwa, a na-emepụta ha naanị na oge opupu ihe ubi ma na-ejikwa organic nri. Ihe kachasị dị irè bụ ngwakọta nke akụkụ abụọ nke humus na otu - ịnweta fatịlaịza.
Dịka e kwuworo, a na-akpụ ụdị humus nile maka ọrụ microorganisms na ikpuru. Na-enweghị ha, mkpụrụ ahụ na-anọgide humus. Ya mere, iji meziwanye ala ala, ọ dị mkpa iji mee ka ọ bụrụ ebe dị mma maka ọrụ dị mkpa ha. Iji mee nke a, a na-atụ aro ka ịtọpụ ala mgbe mgbe, nke ga-enye gị ohere ịmepụta usoro ikuku dị mma. N'oge akọrọ, ọ dị mkpa ịnọgide na-arụkwa mmiri dị mkpa. Maka nke a, a na-eme ka ala dị nro na foil, peat, ahịhịa, sawdust na ụzọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị ụdị humus bụ na ebe ị ga-esi nweta ya, gbalịa ịhụ ebe kwesịrị ekwesị na-eto eto na akwa. Ya mere, ị na-ebelata ala nke ala na-eme nri, na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọbụna na-amụba pasent. Isi ihe bụ icheta nke ahụ Site n'afọ ruo n'afọ ọ gaghị ekwe omume ịkụ otu ihe ubi ahụ n'otu ebe ahụ, ebe ọ bụ na nke a na-eme ka ala dị ala. Ọ bụrụ na ị gbanwee ihe ọkụkụ ahụ ọ dịkarịa ala ọ bụla 3 - 4 afọ, enwere ike izere nke a.
N'ime nhọrọ ndị a na-eme ka ndị ọrụ ubi na-akwụsịkarị na nke ikpeazụ. Humus, dị ka okwu na-achịkwa, dị mma na compost n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ. Mgbe ahụ, a na-eme ihe dị ka 4-8 n'arọ kwa mita mita nke ala.
Ya mere, humus - Mkpụrụ pụrụ iche, nke na-emetụta ọkwa nke ọmụmụ ala, na-etinye ogige ndị na-emerụ ahụ ma gbochie ha ịgbasawanye n'ime ebe obibi. Ya mere, a na-akpọkarị ya nzacha. A na - eme ya site na mkpuru osisi ndị na - eri anụ ma na - edozi site na microorganisms, ikpuru. A pụrụ inweta Humus na saịtị gị, na otu esi etinye mkpụrụ nke ga-esi na ya pụta ga-emeso onye ọ bụla na-elekọta ubi nke ga-etinye fatịlaịza na saịtị ya.
Linden mmanụ aṅụ: nkọwa, mejupụtara, uru na nsogbu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Esila humus, ihe bara uru nke humus maka ala